एक नजरमै मन परेको प्रेमी « Janata Samachar
एक नजरमै मन परेको प्रेमी
प्रकाशित मिति : मंसिर १७, २०७६ मंगलबार
उ कहाँ जाने हो ? को हो ? कता बस्छ केही पनि थाहा थिएन। म कलेज त आईपुगेँ तर मन ध्यान भने उतैतिर थियाे । त्यो दिन कलेज ढिला पुगेकाले सबै साथीहरुले सोध्न लागे आज किन ढिला ? कसलाई भेटेर आईस् ? यति बिहानबिहानै भन्न लागे तर मैले साँचो कुरा भनिन । भनिहाल्नु उचित लागेन मलाई र भने बस कुर्दाकुदै ढिला भयो ।
सानै उमेरदेखि गाउँमा बुबा आमा दिदी र दादासँग बस्दै आएकी म कक्षा १२ पढिसेकेपछि मात्र काठमाडौं टेक्ने माैका पाएको थिएँ । घरबाट कहिल्यै कतै एक्लै हिड्न नसक्ने म पहिलो पटक काठमाडौंको ठूलो शहर देखेर अलमल्ल भएँ । ठूलाठूला घर, बाटामा हतारिँदै हिँडिरहेका ती असंख्य मानिसहरु म त्यतिकै पनि आत्तिए झै हुन थालेँ । आमाबुबाको माया र साथमा हुर्किएँ जस्तो सजिलो एक्लै यो ठूलो शहरमा बस्न नहुने रैछ ।
बिहानको कलेज, लगभग ३० मिनेट लाग्थ्यो कोठाबाट कलेज पुग्न । भनेको समयमा बस नपाउने समस्या मेरो दैनिकको समस्या हुन्थ्यो । कति दिन त बस कुर्दाकुर्दै कलेज जान ढिलो भएर कोठा मै फर्कन्थेँ । चाबहिलको बसाइ नक्सालको मेरो कलेज र गोपिकृष्ण अगाडि सधैँ बस कुर्नुपर्ने, यसैगरी बित्थ्यो मेरो दैनिकी ।
एकदिन ५ः३० कोठामै बजिसकेको थियो । ६ बजे कलेज पुग्न गाह्रो भइसकेको थियो । हतारहतार कोठाबाट निस्किएँ। फेरि बस कुर्नुपर्ने समस्या सम्झदै हतारिँदै गोपिकृष्ण अगाडि पुगेँ तर संयोगबस त्यो दिन बस चाँडै पाएँ । अत्तालिँदै बसमा चढेँ ।
सायद त्यो दिनले मलाई नै कुरिरहेको थियो जस्तो लाग्छ अहिले । उ र मसँगै चढेको जस्तो लाग्छ । बसमा चढेको केही समयपछि मात्र मैले सिट पाएँ र उसले पनि म बसेकै ठाउँमा सिट पायो । झलक्क हेर्दा त त्यति राम्रो हाेइन । तर खाेइ किन हो उ मलाई एक नजरमै मन परिसकेको थियो । पातलो त्यति धेरै अग्लो पनि हाेइन । झट्ट हेर्दा एकदम माया लाग्दो लुरे थियो । यस्तै बैशाख जेठकाे कुरा हो । धेरै चिसो थिएन । भित्रबाट सेतो टि सर्ट र पातलो खालको ज्याकेट, कालो रंगकाे पाइन्ट, स्पोर्ट जुत्ता र कालै कलरकाे टोपी । उसको आखाँमा के हेरेको मात्रै थिएँ म त उसलाई नै हेरेको हेरै पो भएछु । उल्टै उसैले मुन्टो निहुर्यायाे । म झसङ्ग भएँ ।
केहिबेरमा मेरो कलेज आईपुग्यो र म त्यहिँ झरेँ । उ कहाँ जाने हो ? को हो ? कता बस्छ केही पनि थाहा थिएन। म कलेज त आईपुगेँ तर मन ध्यान भने उतैतिर थियाे । त्यो दिन कलेज ढिला पुगेकाले सबै साथीहरुले सोध्न लागे आज किन ढिला ? कसलाई भेटेर आईस् ? यति बिहानबिहानै भन्न लागे तर मैले साँचो कुरा भनिन । भनिहाल्नु उचित लागेन मलाई र भने बस कुर्दाकुदै ढिला भयो ।
साथीहरु कलेजमा होस् या क्यान्टिनमा होस् हरेक ठाउँमा प्रेमीबारेका कुराहरु सुन्दा आफूले आफूलाई टुहुरो बालक जस्तो ठान्थेँ । हुन त उमेर पनि मेरो धेरै भएको थिएन । तर पनि म चाहन्थेँ कि मेरो पनि एउटा असल प्रेमि होस् । उसले मलाई धेरै माया र ख्याल गरोस् तर भावना र जिन्दगीसँग कहिल्यै नखेलोस् । त्यो समयमा कम्तिमा पनि साथी सर्कलमा बोल्ने विषयका लागि एउटा असल प्रेमीको आवश्यक थियो । उसो त मलाई बुबाआमाको मायाको कमी थिएन् तर बुबाआमाबाट पाएको मायाको र प्रेमीबाट पाउने मायामा केही न केही त पक्कै फरक छ । नत्र किन सबै पुगिसरी हुदाँ पनि मनमा एक्लोपनको आभास भइरहन्छ मलाई ।
कलेजबाट छुट्टी भएपछि म कोठा आएर बेडमा पल्टिएँ । खाना बनाउन पनि मन लागेको थिएन। भोक पनि त्यति लागेको महसुस् नै भएन । किन हो किन मेरो मनले उसैलाई मात्र देख्न पाए हुन्थ्याे जस्तो भएको थियो । भोलि कतिबेला आउला जस्तो लाग्यो । मन नभई नभई खाना बनाएर खाएँ र रातिमा पनि त्यही खानालाई फ्राई गरेर खाएँ अनि निद्रा नलागे पनि सुत्ने प्रयास गरेँ । यतिकैमा कलेज जाने समय भयो । हतार हतार म ड्रेस लगाएर सदा झैँ बस कुरिरहेको थिएँ ।
केहिबेर पछि मैले उसलाई देखेँ र मनमा आनन्दको महसुस् गरेँ । आज त जे पर्ला पर्ला उसको नाम सोध्छु भन्ने लागेको थियो । बस आयो उ पनि चढ्यो र म पनि चढेँ । बसमा अरु सबै सिटहरुमा मान्छे बसिसकेका थिए । अन्तिमको सिटमात्र खालि थियो । सायद त्यो सिटले हामीलाई नै पर्खिरहेको जस्तो लाग्यो । एउटै सिटमा त बस्यौँ तर अझै उसको नाम सोध्न सकेको थिइन । उसको नजिकैमा मैले आफ्नो फेसबुक खोलेँ ताकि उसले मेरो नाम थाहा पाओस् र मलाई फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाओस् । त्यतिकैमा कजेल आईपुग्यो र म झरेँ । एकसाता भइसकेको थियो अझै पनि रिक्वेस्ट आएको थिएन । दिनमा १० पटक फेसबुक हेर्थेँ । एकदिन फेसबुक चलाउँदै थिएँ । रिक्वेस्ट आएको रहेछ । उसको त आश नै मरिसकेको थियो रिक्वेस्ट पठाउला भन्ने तर पनि कस्को रहेछ भनेर हेरेँ । एकछिन त म हेरेको हेरै भए । त्यो रिक्वेस्ट अरु कसैको नभएर उसैको थियो जसको रिक्वेस्टको प्रतिक्षामा म तड्पिरहेकी थिएँ । एकछिन त नाँचे उफ्रिएँ, आफैमा एकदम खुशी भएँ र उसलाई साथी बनाइहाले । उसको नाम थियो अतित ।
हामी साथी त भयौँ तर बोल्ने आँट भने दुवैमा थिएन । उसले बोलाउँ छ कि भनेर उसको हाईको प्रतिक्षामा कतिदिन बिताएँ मैले। एकदिन जे पर्लापर्ला भनेर हाई के छ खबर भनेर सोधेँ । उताबाट उसले हेल्लो ठिक छ, तिम्रो के छ भनेर सोध्यो। मैले हातार हतार ठिक छ भनेँ । बिस्तारै हाम्रो कुरा चलिरह्यो । यसै क्रममा हामीले भेट्ने निधो गर्यौ । मेरो कोठा नजिककै स्तुपा थियो र अर्कोदिन त्यही भेट्ने भयौं। म भोलिको प्रतिक्षामा बसेकाे थिएँ । उसलाई मात्र सोचिरहेकी म केही घण्टापछि त हामीसँगै बसेर आफ्ना कुराहरु सँगै बदाम र मकै खादै एकआर्काको दुःख सुखका गफहरु साटासाट गर्यौँ ।
हामी एकअर्कालाई मन पराउन थालिसकेका थियौँ । उसले अहिले १२ कक्षा पढिसकेर केही सानोतिनो जागीर गर्दै रहेछ । उ पनि एक्लै बस्दै आएको बतायो । हाम्रो उमेर सानै भएपनि हामी हरेक कुरामा बुझ्ने मान्छेको जस्तो कुराहरु गर्थ्याै । उ भन्दा म अलि चञ्चले स्वभावको थिएँ । लाग्यो कि म रिसाउँदा उसले मलाई मायाले फकाओस् । म जस्तै चञ्चले होस् । तर उ त्यस्तो थिएन । कहिलेकहीँ त लाग्यो कस्तो फकाउन पनि नजान्ने केटासँग लब गरेछु । म पिन्चे स्वरमा बाेल्थेँ । के गर्नु पहिलो प्रेमि हो अनुभव भएन, अलि अनुभविसँग लब गर्ने हो त ? म सहयोग गरू भनेर उल्टै मलाई उल्लु बनाउँथ्यो ।
यस्तै सानासाना कुरामा रमाउने र जिस्किने हाम्रो बानी भइसकेको थियो । मलाई कहिल्यै पनि लागेन कि हामी एकआर्काबाट दुष्मन भएर छुट्टिनुपर्छ । हाम्रो प्रेम सम्बन्ध समुद्र गहिराइभन्दा कमको लाग्दैन थियो मलाई । तर मलाई कहिल्यै पनि लागेन प्रेम विवाहमा परिणत हुनुपर्छ । वर्तमानमा रमाउने हो । दुई दिनको जिन्दगी हो हासेर जिउनुपर्छ । भन्छन् भविष्य कसले देखेको छ र ? आजसम्म उसैको साथ र मायामा छु अनि धेरै खुशी पनि ।
हलो जोते मामै माम
-ध्रुवनारायण जोन्छे उहिले उहिले स्कूल रमाएर जानुको सट्टा गुच्चा खेल्नमा मनपराएको देखेर बा–आमाले ‘तिमीले पढेर
नेकपाको सकस : जनमतको कदर कि वैचारिक इगो ?
समग्र राजनीतिक परिदृष्य घटनाक्रमलाई हेर्दा मुलुकको राजनीति सधैँ फोहोरी खेलजस्तै भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको द्धिविधा : मुलुककै हिरो बन्ने कि ओलीसँगै नामेट हुने !
आफ्नै पार्टीका ज्यूँदा नेतालाई श्रद्धाञ्जली दिँदै हिड्ने प्रधानमन्त्री जनताले चाहेका थिएनन् ।
अस्पतालकाे बसाइ र काेराेना अनुभव
हजुरहरुलाई त्यसै भगवानको स्थान दिएका होइनन् मान्छेले। डाक्टर प्रतिको विश्वास नै उडाउने काम गर्नुहुन्छ हजुरहरू
बुधवार सामान्यतया माैसम बदली रहने
हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ ।
२०७७ माघ १४ गते बुधवारकाे राशिफल
पारिवारिक साथ मिल्नेछ । प्रेममा सुधार देखिन्छ । नयाँ सम्बन्ध कायम हुनेछ ।
‘पार्लियामेन्टको हत्या गर्ने काम कार्यकारिणीको होइन’
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पार्लियामेन्टको हत्या गर्ने काम कार्यकारिणीको नभएको बताउनुभएको छ ।…
मंगलवार सामान्यतया माैसम बदली रहने
२०७७ माघ १३ गते मंगलवारकाे राशिफल
रोजगारीमा नया जिम्मेवारी थपिनेछ । उत्साहले काम बन्नेछ । पारिवारिक छोटो यात्रा हुनेछ ।
जनता समाचारमा साेमवार प्रकाशित समाचार सार
सभामुख सापकाेटाले भन्नुभयाे, 'संसद भित्र न प्रतिपक्षले न कुनै माननीय सदस्यहरुले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन ।’
तपाईको यो साता (माघ ११ देखि १७ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल)
कपडा बाहिरबाट संवेदनशील अंग छोए यौनहिंसा नहुने अदालतको फैसला
मुख्यमन्त्री राईको विवाह, पर्यटन मन्त्री ढकाल जन्ती
ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन (लाइभ)
निर्वाचन आयोगको एउटा निर्णय सही छ : भुसाल
घुस लिइरहेको सुचनापछि यातायात कार्यालयमा छापा
क–कस्ले लगाउन हुँदैन कोरोनाविरुद्धको खोप ?
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुअघिका ११ जिज्ञासा र जवाफ
ठूलो संख्यामा सचिवहरुको सरुवा गर्ने सरकारको तयारी